Anyị na-enyocha ekwentị Vexia Zippers 5 | Androidsis
Vexia na-akpọghachite anyị maka afọ a na-akpali smartphone na eji mara igwefoto dị mma yana mgbawa octa-core nke ahụ ga-enyere anyị aka ịtụba ọdịnaya mgbasa ozi niile anyị chọrọ n'elu n'ebughị ụzọ gbuchapụ, ewezuga inwe ihuenyo IPS 5-inch, 1GB RAM, nchekwa 8GB na ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị dị ka mmegharị ihuenyo, dualSIM, ngosi ọkụ, ihe mmetụta mkpịsị aka mkpịsị aka. ma ọ bụ ohere nke ịgbanwe batrị ya maka ọzọ.
Nke a Ụlọ ọrụ Spanish a na-akpọ Vexia na-ama ka esi achọta n'ọnụ ọnụ android ya ụzọ isi tinye onwe ya n'ahịa Spanish na ụfọdụ nzọ anyị enweghị ike ịgbaghara, dịka ọ dị na ekwentị Zippers ọhụrụ 5. Ekwentị ị nwere ike zụta maka € 179.
1 Atụmatụ igodo
1.1 Octa-core MT6592 mgbawa
1.3 Ngosipụta na nhazi nkọwa
5 Ihe atụ nke foto ndị e sere
5.4 N'okpuru obere ìhè ọnọdụ
Isi ihe dị na ekwentị Zippers 5 na-enyefe ihe bụ MT6592 octa-core CPU gị 1.7 GHz, igwefoto n'azụ 13 MP na igwefoto n'ihu 5MP na ihuenyo IPS 5-inch, na-echefughị ​​ụda ya dị elu nke dị na ala ekwentị. Ụfọdụ n'ime nkọwa ndị o nwere bụ igodo anụ ahụ ya, nke na-achịkwa ikpochapụ ndị mebere na ihuenyo.
Isi ihe ọzọ dị mma nke ekwentị a bụ imewe ya mara mma nke na-enye gị mmetụta nke inwe ezigbo ekwentị n'echiche a na plastik azụ. N'ime ihe igodo anụ ahụ anyị nwere ike ịgbakwunye ihe mmetụta mkpịsị aka ya, DualSIM, mmegharị ihuenyo, redio FM ma ọ bụ ikike, dịka m kwuru na mbụ, iji gbanwee batrị maka onye ọzọ na jiffy.
Octa-core MT6592 mgbawa
CPU 1.7 GHz octa-core bụ otu nke ihe ndị ga-ahapụ anyị ụtọ kacha mma n'ọnụ mgbe anyị na-eji ekwentị Vexia ọhụrụ a, ebe ọ na-eme ka o kwe omume ịme egwuregwu dị egwu ma tụba ọdịnaya mgbasa ozi niile. Agbanyeghị na anyị enweghị ihe karịrị 1 GB nke RAM na-eso mgbawa a, nke bụ eziokwu bụ na ha na-eme egwuregwu zuru oke maka ebumnuche bụ na anyị enweghị ụdị lag ọ bụla mgbe anyị na-eme nchọgharị ma ọ bụ na-aga n'etiti ngwa. Enwere ike ịhụ nke a nke ọma na nyocha vidiyo emere maka mmemme ahụ.
Site na igwefoto Zippers 5 anyị nwere ike ikwu naanị ihe ọma Na n'agbanyeghị na ọ nweghị ihe pụtara n'ezie ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ekwentị ndị ọzọ, ọ na-emezu ihe a tụrụ anya ya site n'inwe oghere 13MP iji were foto mara mma na ọ na-abanye n'ụzọ ziri ezi nke ekwentị a dị na akụrụngwa ya.
Igwefoto n'ihu 5MP na-enye ohere maka ezigbo selfies, yana dịka ọ dị na azụ ọ na-akpa àgwà ọma n'ọtụtụ ọnọdụ ebe enwere ọkụ zuru oke. Anyị amaralarị otu Android ka na-ata ahụhụ ntakịrị na nke a na foto dị obere. N'ezie, ọ bụrụ na anyị atụnyere akụkụ a na ndị ọzọ nke ekwentị, ọ pụtara n'enweghị obi abụọ ọ bụla. Ma ọ bụghị ya, ọ na-enye ohere ịse foto mgbe ị na-edekọ na HD zuru ezu ma nwee ọnọdụ HDR na-arụ ọrụ nke ọma dịka ị nwere ike ịhụ na ntụnyere na njedebe nke nyocha a.
Ngosipụta na nhazi nkọwa
Ọ bụ ezie na ihuenyo abụghị Super AMOLED, ya IPS HD (1280 x 720) OGS panel ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ niile na akụkụ nlele na-anabata.
Na ihe anyị nwere ike ịchọta isi ihe ọzọ dị mkpa maka ekwentị a bụ na nhazi nkọwa nke na-ejikọta ike ya DualSIM, FM Radio, Bluetooth 4.0, mmegharị ahụ ihuenyo, batrị nwere ike ịgbanwe, ngosi ọkụ ma ọ bụ iji kaadị microSD iji gbasaa 8GB nke nchekwa n'ime.
Ọ dị ịrịba ama bụ mmegharị ahụ ihuenyo ka ị nwee ike jiri pịa okpukpu abụọ gbanye ekwentị, ọrụ nke anyị hụrụ na ekwentị ndị ọzọ na nke ị nwere ike iji na € 179 smartphone.
N'ebe a, m na-aga n'ihu na ihe m na-ekwu na mbụ na CPU na RAM, ọ bụrụgodị na ọ bụ 1GB, ọ bụ ihe zuru ezu iji nweta ọtụtụ usoro ndabere. gbanwee n'etiti ngwa ngwa ngwa n'enweghị ihe ọ bụla, na cores asatọ nke mgbawa na-akpa àgwà ọma mgbe niile.
N'ozuzu Ahụmịhe gam akporo gam akporo nke Zippers ekwentị 5 nyere dị mma. Ọ bụrụ na anyị amaralarị ka esi etinye ezigbo onye nrụpụta dị ka Nova na ngwanrọ, anyị ga-ahụ ka ekwentị ga-esi efe n'oge ụfọdụ.
Nke a bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke a na-apụghị ileghara anya, ebe ọ bụ na ọ dabere ma anyị nwere ike iji smartphone anyị n'ụzọ nkịtị kwa ụbọchị. Nke a smartphone na-eme ka a nnukwu ọrụ na ọnọdụ ụra Dịka ị na-ahụ na onyonyo a na-enye na oriri batrị mgbe ọ nọ n'okpuru steeti a.
Ugbu a, ozugbo ịmalitere iji ekwentị, oriri ga-abawanye ka ọ na-emekarị na njedebe ndị ọzọ nwere batrị 2050mAh. Kedu ihe nwere ike miss bụ ọnọdụ nchekwa ike Nke anyị ga-enwe ike ịhọrọ ozugbo emelitere ya na Android 5.0 Lollipop n'ime afọ niile.
Ọnụ ọnụ nwere ike ịnwe ngwaike kacha mma ma ọ bụ igwefoto dị egwu, ma ọ bụrụ na imewe ahụ adọtaghị uche ma emechaa, ọ nwere ike ịdịgide dị ka ọ gaara adị. Ekwentị Zippers 5 Ọ nwere ọmarịcha ma mara mma nke nwere ike iweta ụfọdụ ncheta na ụfọdụ Xperia, ọ bụ ezie na ọ nwere plastik na azụ na ihe ọ bụ n'ozuzu ya, na-enye mmetụta dị mma mgbe ị nwere ya n'aka gị.
na igodo anụ ahụ na-enye ya ụtọ ndị ọzọ site na-apụ n'anya ndị mebere na ihuenyo. Nke a ga-adabere na uto onye ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ụfọdụ nwere ike ịhụ na ọ dị mkpa ịnweta ha n'ụzọ dị otú a, n'agbanyeghị na usoro ahụ dị taa.
Ihe atụ nke foto ndị e sere
Foto ndị mbụ bụ were mkpebi 4160 x 3120 yana ibu 2MB ma agafewo m ha na mkpebi nke 1600 x 1200 nwere oke ịdị arọ nke 700kb.
Ndị nọ n'aka ekpe enweghị HDR na ndị nọ n'aka nri nwere HDR (Elu Dynamic Oke)
N'okpuru obere ìhè ọnọdụ
The ziri ezi itule na usoro nke components enweta ọgwụgwụ N'ihi na ekwentị a nweta akara dị elu mgbe anyị chọrọ ịmalite ụdị ọdịnaya mgbasa ozi niile site na ihuenyo gị na ndị na-ekwu okwu. Ụda na-enyekwa ahụmịhe dị ukwuu dịka ị hụla na nyocha vidiyo, yana ihe nkiri, usoro, egwu ma ọ bụ egwuregwu vidiyo na-enweta akụkụ kachasị mma.
Egwuregwu ọ bụla kachasị amasị gị ga-arụ ọrụ n'ụzọ kacha mma enwere ike na ekwentị Vexia a, yabụ emela ihere itinye ha maka obi ụtọ gị kacha mma.
El Ekwentị Zippers 5 bụ ekwentị dị mma, ọ bara uru na ha nwere ike ịchọta mma dị ka Motorola nke na-enwe nnukwu nnabata. Ihe anyị nwere ike ime ka ọ pụta ìhè bụ nguzozi dị mma n'etiti akụkụ dị iche iche na ohere na ọ nwere ike inye onye ọrụ ohere ịnweta nkwado dị mma, ebe anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ Spanish na ihe nke a gụnyere.
Ekwentị nwere igwefoto dị mma, mgbawa octa-core, ezigbo imewe, nkọwa pere mpe mana n'ozuzu ha dị ịrịba ama, dị ka redio FM, DualSIM, mmegharị ahụ ihuenyo, ọkwa ọkụ ma ọ bụ batrị nwere ike ịgbanwe, ha jikwaa weta gam akporo kacha mma. ahụmahụ na Ọ dịghị ihe karịrị € 179 site na ụlọ ahịa dịka El Corte Inglés ma ọ bụ weebụsaịtị nke ya. Ị na-ekpebi dị ka mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Vexia Zippers Ekwentị 5 nyochaa: vidiyo-nyochaa, foto na vidiyo
Haziri ngwa kụrụ Google Play search
[APK] Download Sonic Runners for Android ma nwee ọ theụ nke egwuregwu vidiyo a na-enweghị atụ tupu onye ọ bụla ọzọ